မန်တလေးတိုငျး၏ သမိုငျးအကဉျြးနှငျ့ နယျမွဒေသေဆိုငျရာ အခကျြအလကျမြား | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ဤတိုငျးဒသေအတှငျးရှိ အမရပူရတောငျပိုငျး တောငျသမနျ၊ ရှစောရံ၊ ပုပ်ပါး စသညျ့ ဒသေတဈဝိုကျတှငျ ကြောကျခတျေကာလမှစ၍ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှု အခွခေံ အညာသားယဉျကြေးမှုတဈရပျ ထူတောငျခဲ့ခွငျး (ထိုဒသေမြားတှငျ ကြောကျခတျေဦးပိုငျး လူသားမြား အသုံးပွုခဲ့သညျ့ အသုံးအဆောငျမြား၊ ကြောကျလကျနကျမြား တဈပုံတဈပငျတှရှေိ့ခဲ့ရ။ ထိုအသုံးပွုခဲ့သော ခတျေကာလကို “အညာသားယဉျကြေးမှု”(Anyarthian Culture)ဟု ချေါတှငျခဲ့ကွသညျ)၊ သရခေတ်ေတရာ၊ ဟနျလငျး၊ ဗိဿ နိုးမွို့ဟောငျးနှငျ့ ခတျေပွိုငျ မိုငျးမော၊ ဝတီး စသညျ့ ပြူရှေးဟောငျးမွို့မြား တညျရှိခွငျး၊ တကောငျး(ဘီစီ-၂)၊ ပုဂံ(အဒေီ- ၈၄၉)၊ အမရပူရ(အဒေီ- ၁၁၄၄)၊ ပငျးယ(အဒေီ-၁၃၁၂)၊ အငျးဝ(အဒေီ-၁၃၆၄)၊ ညောငျရမျး(အဒေီ-၁၅၉၇)၊ ရတနာပုံ(အဒေီ-၁၈၅၉) စသော မွနျမာမငျးနပွေညျတျောမြား စတငျတညျထောငျခဲ့ခွငျး၊ (အဒေီ-၁၀၄၄) ပုဂံအနျောရထာမငျးလကျထကျတှငျ ပထမမွနျမာနိုငျငံတျော ထူထောငျခဲ့ခွငျး၊ လယျကှငျး(၁၁)ခရိုငျ (နောငျ(၉)ခရိုငျ)တှငျ လယျယာစိုကျပြိုးမှု ထှနျးကားခဲ့ခွငျး၊ (အဒေီ-၁၁၁၂)မှ စ၍ မွနျမာစာအရေးအသား ပျေါပေါကျခဲ့ခွငျး၊ ပငျးမွို့(၄၃)မွို့ ထူထောငျ၍ ကာကှယျရေး တညျဆောကျနိုငျခဲ့ခွငျးတို့ကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။
မွောကျလတ်တီတှဒျ-၁၉ံ၂၀' နှငျ့ ၂၃ံ၄၅' ကွား
အရှလေ့ောငျဂြီတှဒျ- ၉၄ံ၄၅' နှငျ့ ၉၇ံကွား
အရှဘေ့ကျ - ရှမျးပွညျနယျ
အနောကျဘကျ - စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး
တောငျဘကျ - နပွေညျတျော
မွောကျဘကျ - စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး
နှဈစဉျပမျြးမြှ မိုးရခြေိနျလကျမ - ၃၂. ၅၇
အမြားဆုံးမိုးရခြေိနျလကျမ - ၃၆.၁၈' (မိုးကုတျ)
အနညျးဆုံးမိုးရခြေိနျလကျမ -၂.၁၇' (မလှိုငျ)
နှဈစဉျပမျြးမြှ မိုးရှာရကျ - ၅၁ ရကျ
အမွငျ့ဆုံးအပူခြိနျဒီဂရီ - ၄၃.၇ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ (၂၀၁၄)ခုနှဈ
အနိမျ့ဆုံးအပူခြိနျဒီဂရီ - ၁၄ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ (၂၀၁၄)ခုနှဈ
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးတှငျ ခရိုငျ(၇)ခု၊ မွို့နယျ(၂၈)ခု၊ မွို့(၂၈)ခု၊ ရပျကှကျ(၂၇၆)၊ ကြေးရှာအုပျစု(၁၄၁၆)၊ ကြေးရှာ(၄၈၀၀)တို့ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားပါသညျ။ အိမျ‌ခွပေေါငျး (၁၁၀၅၁၃၀)နှငျ့ အိမျထောငျစုပေါငျး (၁၁၇၆၁၅၅)ရှိပါသညျ။
မွို့နလေူဦးရမှော (၁၇၃၈၀၉၄)ဦးဖွဈပွီး ကြေးလကျနေ လူဦးရမှော (၄၀၁၈၈၁၆)ဦး ဖွဈပါသညျ။
ကခငျြ၊ ကယား၊ ကရငျ၊ ခငျြး၊ မှနျ၊ ဗမာ၊ ရခိုငျ၊ ရှမျးတို့ နထေိုငျပွီး တိုငျးရငျးသား (၅၆၈၅၂၇၃)ဦးနှငျ့ နိုငျငံခွားသား (၇၁၆၃၇)ဦး နထေိုငျသညျ။
ဗုဒ်ဓဘာသာ ကိုးကှယျသူ (၅၅၃၈၉၆၅)ဦး၊ ခရဈယာနျ (၄၁၁၉၈)ဦး၊ ဟိန်ဒူ (၁၇၄၂၅)ဦး၊ အစ်စလာမျ (၁၄၈၂၄၃) နှငျ့ အခွား (၁၁၀၇၉)ဦး ရှိပါသညျ။
တိုငျး (၁)၊ ခရိုငျ(၇)၊ မွို့နယျ (၂၈)၊ မွို့မရဲစခနျး (၂၈)၊ နယျမွရေဲစခနျး (၄၁) နှငျ့ ရဲကငျးစခနျး (၂၈)ခုတို့ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားပါသညျ။
သန်ဓေ (၁၀၁၉)ဦး၊ အရနျ (၃၅၃၄၀)ဦး ရှိပါသညျ။
အမြိုးသားလှတျတျော (၁၂)ဦး၊ ပွညျသူ့လှတျတျော (၂၈)ဦး၊ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော အမှတျ-၁ (၂၈)ဦး/အမှတျ-၂ (၂၈)ဦး၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားကိုယျစားလှယျ (၁)ဦး
( ၁ ) ပွညျသူ့ဒီမိုကရစေီပါတီ
( ၂ ) ဝံသာနုဒီမိုကရကျတဈပါတီ
( ၃ ) တိုငျးလိုငျ(ရှမျးနီ) အမြိုးသားမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ
( ၄ ) ရှမျးနီ (တိုငျးလိုငျ)နှငျ့ မွောကျပိုငျးရှမျးမြိုးနှယျစုမြား သှေးစညျးညီညှတျရေးပါတီ
( ၅ ) ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ
( ၆ ) တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျရေးပါတီ
( ၇ ) ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (မွနျမာ)
( ၈ ) အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအငျအားစုပါတီ
( ၉ ) အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ
(၁၀) ”၈၈ မြိုးဆကျကြောငျးသားလူငယျမြား (ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံ)ပါတီ
(၁၃) ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ
(၁၅) မွနျမာနိုငျငံတောငျသူလယျသမားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (ပြျောဘှယျမွို့နယျ)
(၁၆) အမြိုးသားနိုငျငံရေးမဟာမိတျမြားအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (မိတ်ထီလာမွို့နယျ)
(၁၇) ညီညှတျသော ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (မိတ်ထီလာကြောကျဆညျမွို့နယျ)
(၁၈) တအောငျး(ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီ (မိုးကုတျမွို့နယျ)
(၁၉) ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (မိုးကုတျမွို့နယျ)
(၂၀) လီဆူးအမြိုးသားမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (ဒူးလေး)(မိုးကုတျမွို့နယျ)
လူဦးရေ တိုးနှုနျးနှငျ့ ကြား/မ အခြိုး
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှဈ လူဦးရတေိုးနှုနျးမှာ (၁.၁၄%)ဖွဈပွီး၊ ကြား/မ အခြိုးမှာ (၁း၁.၁၂) ဖွဈပါသညျ။
လယျမွေ (၈၇၀၀၀၀)ဧက၊ ယာမွေ (၂၁၃၈၇၉၅ )ဧက၊ ကိုငျးကြှနျးမွေ (၁၆၂၇၅၃)ဧက၊ ဥယြာဉျမွေ (၃၇၆၆၂)ဧက၊ တောငျယာမွေ (၇၂၆)ဧက၊ စုစုပေါငျးအသားတငျ စိုကျပြိုးမွေ ဧရိယာပေါငျး (၃၂၀၉၉၃၆)ဧက ရှိပါသညျ။ စိုကျပြိုးနိုငျခွငျး မပွုနိုငျသော ဧရိယာပေါငျး (၁၈၁၇၅၈၇) ရှိပါသညျ။ လှပျမွေ (၁၅၉၄၈၉)၊ စားကကျြမွေ (၇၇၂၅)၊ စကျမှုလုပျငနျးသုံးမွေ (၅၇၉၈၄)၊ မွို့ရှာနှငျ့ အခွားမွေ (၁၈၂၆၈၂)၊ ကွိုးဝိုငျး/ကွိုးပွငျ ကာကှယျတောမွေ (၁၅၇၃၃၅၃)၊ တောရိုငျးမွေ (၅၆၆၆၈၂)၊ မွရေိုငျး (၅၇၁၇၄)ရှိပါသညျ။
ပနျးတိုငျသီးနှံ (၁၀)မြိုးမှာ စပါး၊ ခညျြမြှငျရှညျဝါ၊ ကွံ၊ ပဲစငျးငုံ၊ ပဲတီစိမျး၊ မတျပဲ၊ နှမျး၊ မွပေဲ၊ နကွော၊ အစထေု့တျပွောငျးတို့ ဖွဈပါသညျ။
ကြှဲ (၇၄၀၉၇)၊ နှား (၂၄၇၃၈၉၈)၊ ဝကျ (၁၀၁၀၇၆၁)၊ ကွကျ (၂၉၂၁၅၇၀၁)၊ ဘဲ (၇၁၈၉၅၉)၊ သိုး (၃၇၁၄၄၄)၊ ဆိတျ (၁၆၉၀၉၀၅)၊ ငုံး (၁၀၇၉၈၀၈)၊ ကွကျဆငျ/ဘဲငနျးမနျဒါလီ (၆၇၉၂၁) မှေးမွူ ထားပါသညျ။
ငါးမှေးမွူရေးတှငျ ငါးမှေးသူဦးရေ (၁၁၇၁)ဦး ရှိပွီး (၇၈၇၃.၂၂၃)ဧက မှေးမွူထားပါသညျ။
ရထားဆကျသှယျရေးတှငျ ဘူတာရုံပေါငျး (၁၃၅)၊ သံလမျးမိုငျ (၇၇၈)မိုငျ၊ ခရီးမိုငျ (၅၆၄.၄၁၄)မိုငျ၊ တံတားကွီး (၂၁၀)စငျး နှငျ့ တံတားငယျ (၁၆၈၀)စငျး ရှိပါသညျ။
ရကွေောငျးလမျးတှငျ ဆိပျကမျး (၉)ခု၊ ရမေိုငျပေါငျး (၄၂၅)မိုငျ ရှိပါသညျ။ လကွေောငျးလမျးတှငျ လယောဉျကှငျး (၄)ခု ရှိပါသညျ။
ရလှေောငျတမံ - ၄၆ ခု
ရထေိနျးတမံ - ၂ ခု
ဆညျ - ၉၃ ခု
ကနျ - ၁၀၇၆ ကနျ
တာ - ၂ ခု
ရနေံထုတျလုပျမှုတှငျ လုပျကှကျ ၂ ကှကျ၊ ‌ရနေံတှငျး ၁၅၈ တှငျးရှိ ပွီး ထှကျရှိသညျ့ ပမာဏမှာ (၂၀၁၄-၁၅)၂၇၀၀၀၀ ဂါလံ ဖွဈသညျ။
စကျသုံးဆီအရောငျးဆိုငျပေါငျး (၅၇၇) ရှိပွီး ပငျမဓာတျအားခှဲရုံ (၆) ရုံ၊ ထရနျစဖျောမာ (၅၇၇၁)လုံး၊ မီးသုံးစှဲသူဦးရေ (၇၀၃၆၀၈)ဦးရှိသညျ။
ကြေးရှာမီးလငျးရေးတှငျ အသေးစားရအေားလြှပျစဈ (၈၉) ရှာ၊ ဇီဝဓာတျငှသေုံ့း (၇) ရှာ၊ ဓာတျအားစနဈ (၂၀၈၈) ရှာ၊ နစှေမျးအငျစနဈ (၇၂၂) ရှာ၊ ဒီဇယျစကျ (၈၂၃) ရှာ ရှိပါသညျ။
ဟိုတယျ - ၁၇၄ လုံး
မိုတယျ - ၁ လုံး
အငျး - ၆ လုံး
တညျးခိုခနျး - ၃၇ ခု
ရယောဉျ - ၄၃ စငျး
မျောတျောယာဉျ - ၈၄ စငျး
တက်ကသိုလျ - ၁၈
ကောလိပျ - ၂
သိပ်ပံ‌ကြောငျး - ၂
အထက - ၂၄၂
အလက - ၃၀၁
အမက - ၂၄၉၄
အထက(ခှဲ) - ၁၈၃
အလက(ခှဲ) - ၃၆၁
အမက(ခှဲ) - ၇၆
မူလှနျ - ၅၂၉
ဆရာ : ကြောငျးသား (အထကျတနျး) ၁ : ၂၅
ဆရာ : ကြောငျးသား (အလယျတနျး) ၁ : ၃၀
ဆရာ : ကြောငျးသား (မူလတနျး) ၁ : ၂၀
ဘုနျးတျောကွီးပညာသငျကြောငျး - ၃၂၅
ပုဂ်ဂလိကကြောငျး - ၁၄၉
ဆေးရုံ (ဗဟိုအဆငျ့အပါအဝငျ) - ၁၀၈
ဒသနျေတရဌာန - ၈
ဒသေန်တရဌာနခှဲ - ၉
ကြောငျးကနျြးမာရေးဌာန - ၇
မိခငျနှငျ့ကလေး ကနျြးမာရေးဌာန - ၂၅
ကြေးလကျကနျြးမာရေးဌာန/ - ၁၂၀/၃၉
ကြေးလကျကနျြးမာရေးဌာနခှဲ - ၇၅၁
တိုငျးရငျးဆေးကုဌာန - ၂၅
အနာကွီး၊ ငှကျဖြား၊ ကာလသား - ၃၀
တီဘီရောဂါတိုကျဖကျြရေးဌာန - ၉
ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံ - ၄၂
ပုဂ်ဂလိကဆေးခနျး - ၉၁
GP ဆေးခနျး - ၁၃၃၄
ဆရာဝနျနှငျ့ လူဦးရအေခြိုး ၁ : ၁၅၁၉
သူနာပွုနှငျ့ လူဦးရေးအခြိုး ၁ : ၄၆၈၀
ကုတငျနှငျ့လူဦးရအေခြိုး ၁ : ၈၂၄၀
(၆/၈၈) ဥပဒအေရ သကျတမျးရှိ မှတျပုံတငျအသငျး - ၂၁ သငျး
(၃၁/၂၀၁၄)ဥပဒအေရ သကျတမျးရှိ မှတျပုံတငျအသငျး - ၅၉၃ သငျး
မိခငျနှငျ့ကလေးစောငျ့ရှောကျရေး - ၂၅၄၃၁၀၁ ဦး
အမြိုးသမီးရေးရာ - ၉၃၆၃၀၀ ဦး
ကွကျခွနေီ - ၁၃၄၈၄ ဦး
INGO - ၄၁ သငျး
တနျခိုးကွီးဘုရားစတေီပေါငျး - ၂၁၁ ဆူ
ဘုနျးကွီးကြောငျး - ၉၉၂၉ ကြောငျး
ရဟနျး - ၅၂၆၅၂ ပါး
သာမဏေ - ၄၆၈၅၄ ပါး
သီလရှငျကြောငျး - ၄၇၄ ကြောငျး
သီလရှငျ - ၈၅၅၉ ပါး
ခရဈယာနျဘုရားရှဈခိုးကြောငျး (ခြာ့ချြ) - ၁၅၁ ကြောငျး
အစ်စလာမျဝတျပွုကြောငျး (ဗလီ) - ၁၉၆ ကြောငျး
ဟိန်ဒူဘုရားရှဈခိုးကြောငျး - ၁၀၉ ကြောငျး
တရုတျဘုရားကြောငျး - ၃၅ ‌ကြောငျး
ပုံနှိပျစကျ လုပျငနျး - ၃၀၇ ခု
ကှနျပြူတာ - ၆၃၀ ခု
မိတျထူ - ၅၆၂ ခု
တေးသံသှငျးလုပျငနျး - ၉ ခု
ဗှီဒီယို လုပျငနျး - ၁၉၁၇ ခု
ကြေးလကျဒသေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဦးစီးဌာန အခကျြအလကျမြား
ကတ်တရာလမျး - ၈၉/၂.၃ မိုငျ
ကြောကျလမျး - ၃၆၃/၇.၉ မိုငျ
ကှနျကရဈလမျး - ဝ/၅ မိုငျ
မွလေမျး - ၄၀၇/၅.၅ မိုငျ
စုစုပေါငျး - ၈၅၄/၄.၃ မိုငျ
ကှနျကရဈ - ၁၉
သဈသား - ၄၄
ရပွှေနျ - ၃၅၇
ရကြေျော - ၃၃
စုစုပေါငျး - ၄၅၃ စငျး
တှငျးတိမျ - ၁၂၁
တှငျးနကျ - ၈၇၄
လကျတူးတှငျး - ၄၀
ရကေနျ - ၃၁၀
စိမျ့စမျး - ၇၈
အခွား - ၄၂၁
စုစုပေါငျး - ၁၈၈၄ တှငျး
ယငျလုံအိမျသာ - ၂၆၈ လုံး
ဆိုလာ - ၃၂၉၁၀ အိမျ
လြှပျစဈ - ၈၀ ရှာ
ကြေးလကျအိမျရာ- ၆၅ အိမျ
ပွငျဦးလှငျခရိုငျ - တကောငျး(ဘီစီ-၂)
ကြောကျဆညျခရိုငျ - အငျးဝ (အဒေီ-၁၃၆၄)
ညောငျဦးခရိုငျ - ပုဂံ (အဒေီ-၈၄၉)
ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှု အဆောကျအအုံ တညျရှိရာဇုနျ (၇) ဇုနျ
အတုမရှိကြောငျး၊ ရှနေနျးတျောကြောငျး( အောငျမွသောစံမွို့နယျ )
မဟာဝယေံဘုံသာဗားဂရာကြောငျး ( အမရပူရမွို့နယျ)
အငျးဝမွို့ဟောငျးဒသေ၊ ပငျးယမွို့ဟောငျး - (တံတားဦးမွို့နယျ)
မွငျစိုငျးမွို့ဟောငျး - (ကြောကျဆညျမွို့နယျ)
ပငျလယျ (မိုငျးမော) မွို့ဟောငျး( မွဈသားမွို့နယျ)
ဝတီးမွို့ဟောငျး ( နှားထိုးကွီးမွို့နယျ)
( www.mandalayregion.gov.mm မှ ထုတျနှုတျဖျောပွသညျ)
မန္တလေးတိုင်း၏ သမိုင်းအကျဉ်းနှင့် နယ်မြေဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
မန္တလေးတိုင်းကို မြန်မာမင်းများ လက်ထက်က တမ္ပဒီပတိုင်းဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ်၊ မျိုးချစ်စိတ်တို့ ထွန်းပေါက်ဖွားရာဒေသဟု ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤတိုင်းဒေသအတွင်းရှိ အမရပူရတောင်ပိုင်း တောင်သမန်၊ ရွှေစာရံ၊ ပုပ္ပါး စသည့် ဒေသတစ်ဝိုက်တွင် ကျောက်ခေတ်ကာလမှစ၍ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အခြေခံ အညာသားယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် ထူတောင်ခဲ့ခြင်း (ထိုဒေသများတွင် ကျောက်ခေတ်ဦးပိုင်း လူသားများ အသုံးပြုခဲ့သည့် အသုံးအဆောင်များ၊ ကျောက်လက်နက်များ တစ်ပုံတစ်ပင်တွေ့ရှိခဲ့ရ။ ထိုအသုံးပြုခဲ့သော ခေတ်ကာလကို “အညာသားယဉ်ကျေးမှု”(Anyarthian Culture)ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်)၊ သရေခေတ္တရာ၊ ဟန်လင်း၊ ဗိဿ နိုးမြို့ဟောင်းနှင့် ခေတ်ပြိုင် မိုင်းမော၊ ဝတီး စသည့် ပျူရှေးဟောင်းမြို့များ တည်ရှိခြင်း၊ တကောင်း(ဘီစီ-၂)၊ ပုဂံ(အေဒီ- ၈၄၉)၊ အမရပူရ(အေဒီ- ၁၁၄၄)၊ ပင်းယ(အေဒီ-၁၃၁၂)၊ အင်းဝ(အေဒီ-၁၃၆၄)၊ ညောင်ရမ်း(အေဒီ-၁၅၉၇)၊ ရတနာပုံ(အေဒီ-၁၈၅၉) စသော မြန်မာမင်းနေပြည်တော်များ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း၊ (အေဒီ-၁၀၄၄) ပုဂံအနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ထူထောင်ခဲ့ခြင်း၊ လယ်ကွင်း(၁၁)ခရိုင် (နောင်(၉)ခရိုင်)တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု ထွန်းကားခဲ့ခြင်း၊ (အေဒီ-၁၁၁၂)မှ စ၍ မြန်မာစာအရေးအသား ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း၊ ပင်းမြို့(၄၃)မြို့ ထူထောင်၍ ကာကွယ်ရေး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မြောက်လတ္တီတွဒ်-၁၉ံ၂၀' နှင့် ၂၃ံ၄၅' ကြား
အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်- ၉၄ံ၄၅' နှင့် ၉၇ံကြား
အရှေ့ဘက် - ရှမ်းပြည်နယ်
အနောက်ဘက် - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
မြောက်ဘက် - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန်လက်မ - ၃၂. ၅၇
အများဆုံးမိုးရေချိန်လက်မ - ၃၆.၁၈' (မိုးကုတ်)
အနည်းဆုံးမိုးရေချိန်လက်မ -၂.၁၇' (မလှိုင်)
နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ မိုးရွာရက် - ၅၁ ရက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဒီဂရီ - ၄၃.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၂၀၁၄)ခုနှစ်
အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ဒီဂရီ - ၁၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၂၀၁၄)ခုနှစ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိုင်(၇)ခု၊ မြို့နယ်(၂၈)ခု၊ မြို့(၂၈)ခု၊ ရပ်ကွက်(၂၇၆)၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၁၄၁၆)၊ ကျေးရွာ(၄၈၀၀)တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အိမ်‌ခြေပေါင်း (၁၁၀၅၁၃၀)နှင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၁၇၆၁၅၅)ရှိပါသည်။
မြို့နေလူဦးရေမှာ (၁၇၃၈၀၉၄)ဦးဖြစ်ပြီး ကျေးလက်နေ လူဦးရေမှာ (၄၀၁၈၈၁၆)ဦး ဖြစ်ပါသည်။
ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းတို့ နေထိုင်ပြီး တိုင်းရင်းသား (၅၆၈၅၂၇၃)ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသား (၇၁၆၃၇)ဦး နေထိုင်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၅၅၃၈၉၆၅)ဦး၊ ခရစ်ယာန် (၄၁၁၉၈)ဦး၊ ဟိန္ဒူ (၁၇၄၂၅)ဦး၊ အစ္စလာမ် (၁၄၈၂၄၃) နှင့် အခြား (၁၁၀၇၉)ဦး ရှိပါသည်။
တိုင်း (၁)၊ ခရိုင်(၇)၊ မြို့နယ် (၂၈)၊ မြို့မရဲစခန်း (၂၈)၊ နယ်မြေရဲစခန်း (၄၁) နှင့် ရဲကင်းစခန်း (၂၈)ခုတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
သန္ဓေ (၁၀၁၉)ဦး၊ အရန် (၃၅၃၄၀)ဦး ရှိပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၂)ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၂၈)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အမှတ်-၁ (၂၈)ဦး/အမှတ်-၂ (၂၈)ဦး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦး
( ၁ ) ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ
( ၂ ) ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
( ၃ ) တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
( ၄ ) ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ
( ၅ ) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
( ၆ ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
( ၇ ) ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)
( ၈ ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
( ၉ ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
(၁၀) ”၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
(၁၃) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
(၁၅) မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်)
(၁၆) အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (မိတ္ထီလာမြို့နယ်)
(၁၇) ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မိတ္ထီလာကျောက်ဆည်မြို့နယ်)
(၁၈) တအောင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ (မိုးကုတ်မြို့နယ်)
(၁၉) ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မိုးကုတ်မြို့နယ်)
(၂၀) လီဆူးအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေး)(မိုးကုတ်မြို့နယ်)
လူဦးရေ တိုးနှုန်းနှင့် ကျား/မ အချိုး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် လူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ (၁.၁၄%)ဖြစ်ပြီး၊ ကျား/မ အချိုးမှာ (၁း၁.၁၂) ဖြစ်ပါသည်။
လယ်မြေ (၈၇၀၀၀၀)ဧက၊ ယာမြေ (၂၁၃၈၇၉၅ )ဧက၊ ကိုင်းကျွန်းမြေ (၁၆၂၇၅၃)ဧက၊ ဥယျာဉ်မြေ (၃၇၆၆၂)ဧက၊ တောင်ယာမြေ (၇၂၆)ဧက၊ စုစုပေါင်းအသားတင် စိုက်ပျိုးမြေ ဧရိယာပေါင်း (၃၂၀၉၉၃၆)ဧက ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မပြုနိုင်သော ဧရိယာပေါင်း (၁၈၁၇၅၈၇) ရှိပါသည်။ လှပ်မြေ (၁၅၉၄၈၉)၊ စားကျက်မြေ (၇၇၂၅)၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမြေ (၅၇၉၈၄)၊ မြို့ရွာနှင့် အခြားမြေ (၁၈၂၆၈၂)၊ ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောမြေ (၁၅၇၃၃၅၃)၊ တောရိုင်းမြေ (၅၆၆၆၈၂)၊ မြေရိုင်း (၅၇၁၇၄)ရှိပါသည်။
ပန်းတိုင်သီးနှံ (၁၀)မျိုးမှာ စပါး၊ ချည်မျှင်ရှည်ဝါ၊ ကြံ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ၊ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ နေကြာ၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွဲ (၇၄၀၉၇)၊ နွား (၂၄၇၃၈၉၈)၊ ဝက် (၁၀၁၀၇၆၁)၊ ကြက် (၂၉၂၁၅၇၀၁)၊ ဘဲ (၇၁၈၉၅၉)၊ သိုး (၃၇၁၄၄၄)၊ ဆိတ် (၁၆၉၀၉၀၅)၊ ငုံး (၁၀၇၉၈၀၈)၊ ကြက်ဆင်/ဘဲငန်းမန်ဒါလီ (၆၇၉၂၁) မွေးမြူ ထားပါသည်။
ငါးမွေးမြူရေးတွင် ငါးမွေးသူဦးရေ (၁၁၇၁)ဦး ရှိပြီး (၇၈၇၃.၂၂၃)ဧက မွေးမြူထားပါသည်။
ရထားဆက်သွယ်ရေးတွင် ဘူတာရုံပေါင်း (၁၃၅)၊ သံလမ်းမိုင် (၇၇၈)မိုင်၊ ခရီးမိုင် (၅၆၄.၄၁၄)မိုင်၊ တံတားကြီး (၂၁၀)စင်း နှင့် တံတားငယ် (၁၆၈၀)စင်း ရှိပါသည်။
ရေကြောင်းလမ်းတွင် ဆိပ်ကမ်း (၉)ခု၊ ရေမိုင်ပေါင်း (၄၂၅)မိုင် ရှိပါသည်။ လေကြောင်းလမ်းတွင် လေယာဉ်ကွင်း (၄)ခု ရှိပါသည်။
ရေလှောင်တမံ - ၄၆ ခု
ရေထိန်းတမံ - ၂ ခု
ဆည် - ၉၃ ခု
ကန် - ၁၀၇၆ ကန်
ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင် လုပ်ကွက် ၂ ကွက်၊ ‌ရေနံတွင်း ၁၅၈ တွင်းရှိ ပြီး ထွက်ရှိသည့် ပမာဏမှာ (၂၀၁၄-၁၅)၂၇၀၀၀၀ ဂါလံ ဖြစ်သည်။
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ပေါင်း (၅၇၇) ရှိပြီး ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ (၆) ရုံ၊ ထရန်စဖော်မာ (၅၇၇၁)လုံး၊ မီးသုံးစွဲသူဦးရေ (၇၀၃၆၀၈)ဦးရှိသည်။
ကျေးရွာမီးလင်းရေးတွင် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ် (၈၉) ရွာ၊ ဇီဝဓာတ်ငွေ့သုံး (၇) ရွာ၊ ဓာတ်အားစနစ် (၂၀၈၈) ရွာ၊ နေစွမ်းအင်စနစ် (၇၂၂) ရွာ၊ ဒီဇယ်စက် (၈၂၃) ရွာ ရှိပါသည်။
ဟိုတယ် - ၁၇၄ လုံး
မိုတယ် - ၁ လုံး
အင်း - ၆ လုံး
တည်းခိုခန်း - ၃၇ ခု
ရေယာဉ် - ၄၃ စင်း
မော်တော်ယာဉ် - ၈၄ စင်း
တက္ကသိုလ် - ၁၈
ကောလိပ် - ၂
သိပ္ပံ‌ကျောင်း - ၂
အထက(ခွဲ) - ၁၈၃
အလက(ခွဲ) - ၃၆၁
အမက(ခွဲ) - ၇၆
မူလွန် - ၅၂၉
ဆရာ : ကျောင်းသား (အထက်တန်း) ၁ : ၂၅
ဆရာ : ကျောင်းသား (အလယ်တန်း) ၁ : ၃၀
ဆရာ : ကျောင်းသား (မူလတန်း) ၁ : ၂၀
ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်း - ၃၂၅
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း - ၁၄၉
ဆေးရုံ (ဗဟိုအဆင့်အပါအဝင်) - ၁၀၈
ဒသေန်တရဌာန - ၈
ဒေသန္တရဌာနခွဲ - ၉
ကျောင်းကျန်းမာရေးဌာန - ၇
မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေးဌာန - ၂၅
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန/ - ၁၂၀/၃၉
ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ - ၇၅၁
တိုင်းရင်းဆေးကုဌာန - ၂၅
အနာကြီး၊ ငှက်ဖျား၊ ကာလသား - ၃၀
တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန - ၉
ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ - ၄၂
ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း - ၉၁
GP ဆေးခန်း - ၁၃၃၄
ဆရာဝန်နှင့် လူဦးရေအချိုး ၁ : ၁၅၁၉
သူနာပြုနှင့် လူဦးရေးအချိုး ၁ : ၄၆၈၀
ကုတင်နှင့်လူဦးရေအချိုး ၁ : ၈၂၄၀
(၆/၈၈) ဥပဒေအရ သက်တမ်းရှိ မှတ်ပုံတင်အသင်း - ၂၁ သင်း
(၃၁/၂၀၁၄)ဥပဒေအရ သက်တမ်းရှိ မှတ်ပုံတင်အသင်း - ၅၉၃ သင်း
မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး - ၂၅၄၃၁၀၁ ဦး
အမျိုးသမီးရေးရာ - ၉၃၆၃၀၀ ဦး
ကြက်ခြေနီ - ၁၃၄၈၄ ဦး
INGO - ၄၁ သင်း
တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီပေါင်း - ၂၁၁ ဆူ
ဘုန်းကြီးကျောင်း - ၉၉၂၉ ကျောင်း
ရဟန်း - ၅၂၆၅၂ ပါး
သာမဏေ - ၄၆၈၅၄ ပါး
သီလရှင်ကျောင်း - ၄၇၄ ကျောင်း
သီလရှင် - ၈၅၅၉ ပါး
ခရစ်ယာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း (ချာ့ခ်ျ) - ၁၅၁ ကျောင်း
အစ္စလာမ်ဝတ်ပြုကျောင်း (ဗလီ) - ၁၉၆ ကျောင်း
ဟိန္ဒူဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း - ၁၀၉ ကျောင်း
တရုတ်ဘုရားကျောင်း - ၃၅ ‌ကျောင်း
ပုံနှိပ်စက် လုပ်ငန်း - ၃၀၇ ခု
ကွန်ပျူတာ - ၆၃၀ ခု
မိတ်ထူ - ၅၆၂ ခု
တေးသံသွင်းလုပ်ငန်း - ၉ ခု
ဗွီဒီယို လုပ်ငန်း - ၁၉၁၇ ခု
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အချက်အလက်များ
ကတ္တရာလမ်း - ၈၉/၂.၃ မိုင်
ကျောက်လမ်း - ၃၆၃/၇.၉ မိုင်
ကွန်ကရစ်လမ်း - ဝ/၅ မိုင်
မြေလမ်း - ၄၀၇/၅.၅ မိုင်
စုစုပေါင်း - ၈၅၄/၄.၃ မိုင်
ကွန်ကရစ် - ၁၉
သစ်သား - ၄၄
ရေပြွန် - ၃၅၇
ရေကျော် - ၃၃
စုစုပေါင်း - ၄၅၃ စင်း
တွင်းတိမ် - ၁၂၁
တွင်းနက် - ၈၇၄
လက်တူးတွင်း - ၄၀
ရေကန် - ၃၁၀
စိမ့်စမ်း - ၇၈
အခြား - ၄၂၁
စုစုပေါင်း - ၁၈၈၄ တွင်း
ယင်လုံအိမ်သာ - ၂၆၈ လုံး
ဆိုလာ - ၃၂၉၁၀ အိမ်
လျှပ်စစ် - ၈၀ ရွာ
ကျေးလက်အိမ်ရာ- ၆၅ အိမ်
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် - တကောင်း(ဘီစီ-၂)
ကျောက်ဆည်ခရိုင် - အင်းဝ (အေဒီ-၁၃၆၄)
ညောင်ဦးခရိုင် - ပုဂံ (အေဒီ-၈၄၉)
ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အအုံ တည်ရှိရာဇုန် (၇) ဇုန်
အတုမရှိကျောင်း၊ ရွှေနန်းတော်ကျောင်း( အောင်မြေသာစံမြို့နယ် )
မဟာဝေယံဘုံသာဗားဂရာကျောင်း ( အမရပူရမြို့နယ်)
အင်းဝမြို့ဟောင်းဒေသ၊ ပင်းယမြို့ဟောင်း - (တံတားဦးမြို့နယ်)
မြင်စိုင်းမြို့ဟောင်း - (ကျောက်ဆည်မြို့နယ်)
ပင်လယ် (မိုင်းမော) မြို့ဟောင်း( မြစ်သားမြို့နယ်)
ဝတီးမြို့ဟောင်း ( နွားထိုးကြီးမြို့နယ်)
( www.mandalayregion.gov.mm မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြသည်)
About Mandalay Read 446 times